Dhageysiga Khudbadaha Musharaxiinta Gudoonka Barlamaanka Galmudug oo – Kismaayo24 News Agency
Dhageysiga Khudbadaha Musharaxiinta Gudoonka Barlamaanka Galmudug oo
by admin 16th January 2020 0145
Xildhibaannada cusub ee maamulka Galmudug ayaa maanta lagu wadaa inay dhageystaan khudbadaha musharixiinta u taagan qabashada xilka guddoonka Baarlamaanka Galmudug.
Musharixiinta is diiwaangeliyey ee ku tartami doona xilka guddoonka Baarlamaanka Galmudug oo gaaraya 7 Xubnood ayaa shalay la gudoonsiiyey shahaadada musharaxnimada ka dib markii ay buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa.
Saddex ka mid ah todobada musharax ayaa waxaa ay u taagan yihiin qabashada xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka, kuwaasoo kala ah Xildhibaan Maxamed Nuur Gacal, Xildhibaan Abdinaasir Aadan Cusmaan & Cabdullaahi Axmed Calasow.
Sidoo kale Guddoomiye ku-xigeenka 1aad iyo 2aad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa u taagan Afar Musharax oo uu kamid yahay Guddoomiye ku-xigeenkii hore ee labaad Maxamed Sheekh Axmed Maalin.
Berri oo taariikhdu tahay 17-ka January kuna began maalin Jimco ah ayaa lagu wadaa in Magaalada Dhuusamareeb lagu qabto doorashada Guddoonka Baarlamaanka Galmudug sida ay horey u shaaciyeen guddiga doorashada gudoonka Baarlamanka.
Ciidamada Komandooska Somaaliya oo dil ugeystay Nabadoon Caan ka ah Gobolka.
Ciidamada Amaanka Muqdisho oo Nin hobeysan ku dilay agagaarka.
TOOS U DAAWO: Doorashada Guddoomiye ku xigeenada Baarlamaanka oo Hada Bilaabatay
Tifaftiraha K24 12th January 2017
Daawo: Culimada Magaalada Kismaayo oo Baaq u diray shacabka ku Nool Kismaayo iyo deegaannada Jubbaland
Daawo: Magaalada boosaaso oo maalintii labaad go’doonsan gaadiidka oo aan dhaqaaqi karin iyo….